Ukukhuphuka Kokumakethwa Komphakathi Okuqhutshwa Injongo | Martech Zone
Ukukhuphuka Kokumaketha Komphakathi Okuqhutshwa Injongo
NgoLwesihlanu, Septhemba 5, 2014 Douglas Karr
Imvamisa uzongithola kuzingxoxo-mpikiswano ezinkulu kwi-inthanethi nganoma yini ehlobene nezepolitiki, inkolo nobungxiwankulu… zonke izinkinobho ezivuthayo abantu abaningi abazigwemayo. Kungakho nginezindawo ezizimele nezibhalwe uphawu kumithombo yezokuxhumana. Uma ufuna ukumaketha kuphela, landela umkhiqizo. Uma ungifuna, ngilandele… kodwa qaphela… uthola konke kimi.
Ngenkathi ngingu-capitalist ongenamahloni, nami nginenhliziyo enkulu. Ngikholwa wukuthi kufanele sisizane futhi singanciki ezikhungweni zemisebenzi ezingasebenzi kahle nezingasebenzi. Ngikholwa ngokweqiniso ukuthi indlela esiguqula ngayo izinto kungukuthatha umthwalo wemfanelo womuntu siqu nokusiza ukuba ngabavikeli benguquko. Okwethu agency uhlala enikela ngesikhathi, imali nezinye izinsiza hhayi ukusiza izinhlangano ezisiza umphakathi kuphela… kodwa futhi ukusiza amabhizinisi angenazo izinsizakusebenza kodwa anethembiso.
Akusekuhle ngokwanele ukuba ne- ukuxhumana komphakathi. Ukumaketha i-3.0 kuzonqotshwa yilabo ababa yimikhiqizo yezenhlalo eqhutshwa yizinhloso, futhi ukwenza kanjalo, umkhombandlela we-CMO, CSO, CSR, kanye noweSisekelo kumele uhambisane ukuletha indaba yomkhiqizo ohlangene empilweni. Hlola I-infographic yethu yokuqala ngezansi ngamaqiniso aqatha abandayo akwenza kucace ikusasa lenzuzo kuyinjongo, futhi izinhlobo ezivelele kakhulu zesikhathi esizayo kuzoba lezo ezihambisa ushintsho lomphakathi olunenjongo kakhulu. USimon Mainwaring
Akuyona nje into efanele ukwenziwa, ukuqhutshwa yinjongo nakho kuba yinto elindelwe amabhizinisi, i- ukugqugquzela abasebenzi kanye nomkhuba okhulayo wokuthenga ngabathengi. Abantu bafuna imali yabo iye emabhizinisini ayaziyo imvelo, aphathe abasebenzi bawo kahle, futhi atshale isikhathi namandla ekwenzeni umhlaba ube yindawo engcono.
Ngiyajabula ukumaketha okuqhutshwa yinjongo iba isu elikhulayo nesihloko sengxoxo - ngike ngabhala phambilini mayelana nokukhungatheka enginakho lapho abantu begxeka imbangela yokumaketha (sixoxe ngalokhu ne- Inkinga ye-ALS Ice Bucket… Ugh). Ngingakhuthaza zonke izinkampani ukuthi zithuthukise imizamo abayenzayo yokusiza labo ababazungezile - lokhu kukhomba okuningana ukuthi kungani!
Tags: imbangelaimbangela yokumakethaInjongoukumaketha okuqhutshwa yinjongoukumaketha komphakathi okuqhutshwa yinjongokwenziwa inhlosoUSimon Mainwaringimikhiqizo yomphakathithina kuqala
Ukwenza ngcono indlela yokuguqula umholi uye kwikhasimende
Le Nqubo Eyodwa Yokuthengisa Kungenzeka Ilahle Inkampani Yakho Ama- $ 4 Million Ngonyaka
Sep 5, 2014 ngo-1: 11 PM
Kuhle kakhulu, uDouglas. Lokhu kwenzeka ngokushesha okukhulu futhi kufanele sonke sikulungele ukukwamukela. Ngiyabonga!
Sep 6, 2014 ku-1: 21 AM
Lokho akungibeki suprising kunalokho labo ubuso beqiniso emnothweni ans yebo usuthole konke !!!
Nov 28, 2014 ngo-12: 20 AM
IGreat Post uDouglas. Izinombolo ozihlinzekile kule ndatshana zifundisa kakhulu. Ngithole i-athikili efanayo ekhuluma ngokuthi ukumaketha okuqhutshwa yizinhloso kungaphezu nje kwegama lokukhangisa ledijithali. http://bit.ly/1yj272u